IJetBrains Yethula Isikhala, Ipulatifomu Yokubambisana Yonjiniyela Nabaklami | Kusuka kuLinux
IJetBrains yethula i-Space, ipulatifomu yokubambisana yabathuthukisi nabadizayinisi
I-JetBrains (inkampani ekhiqiza isoftware eyenzelwe ukuphathwa kwamaphrojekthi nezindawo ezihlanganisiwe zentuthuko zezilimi ezahlukahlukene zokuhlela) usanda kuvula ukwethulwa komphakathi kwe-Space, ipulatifomu yokubambisana yomuntu ngamunye yamaqembu wokudala.
Space ihlose ukuba yisisekelo samaqembu okungabandakanya onjiniyela, ukumaketha, ukuklama, izinsiza kusebenza, amaqembu ezomthetho nabanye abenza noma yiluphi uhlobo lomsebenzi oludinga ukuxhumana nge-multimedia kanye neziteshi eziningi, ukuhlela imihlangano nokuphathwa kwephrojekthi.
Inhloso yeSikhala ngu hlanganisa wonke amathuluzi wokusebenzisana jikelelenjengezingxoxo, ukuphathwa kwethimba kanye nephrojekthi, imihlangano nokuhlelwa, kanye nemibhalo, konke kusendaweni eyodwa. Ngenxa yalokhu, yonke isoftware noma umjikelezo wokuthuthuka wokudala uboniswa kuhlelo lokusebenza olulodwa, futhi asikho isidingo "sokushintsha umongo" (noma ukushintsha phakathi kwezinhlelo zokusebenza lapho ulahlekelwa indawo).
"Nge-Space, asikho isidingo sokushintsha amathuluzi njengoba yonke into isendaweni eyodwa, okusisiza ukuthi sithole kalula ukubuka konke okuhle kuyo yonke inkampani," kusho u-Andras Kindler, ongumsunguli we-Makery, umnikezeli wesevisi. Kanye nemikhiqizo yedijithali. “Sisebenzisa izinhlu zokubheka okukhona nokungekho, izinkinga, ukubuyekezwa kwamakhodi akhelwe ngaphakathi, okuthunyelwe kwebhulogi, nokuningi. Isikhala sisivumela ukuthi sigcine zonke izinqubo ezisendleleni «.
Ngale ndlela, Isikhala sisiza ukudala umqondo ophelele kumuntu ngamunye eqenjini, ukuvumela ukuthi isicelo siguqulwe ukuze sihambisane nendima yomuntu oyisebenzisayo.
"Ngaphambi kweSikhala, abathuthukisi bethu bebevame ukuzizwa behlukanisiwe neqembu lonke futhi bengadlali iqhaza elijulile kumaphrojekthi," kusho u-Anna Vinogradova, isikhulu sezokukhangisa kwa-AmberCore Software Ltd., okuyinkampani egxile kwezentuthuko yemikhiqizo yezobuchwepheshe. "Besilokhu sifuna ithuluzi elifaka konke eqenjini elilodwa futhi lenze kube lula ukuthi amalungu eqembu axoxe ngemisebenzi yawo omunye nomunye kunokuhlala yedwa endaweni yabo yokugcina izinto."
Ngokuzayo, i-Space izongeza izici eziyivumela ukuthi ivumelanise ne-Google Khalenda ne-Outlook, iphinde ihlangane namanye amathuluzi athandwayo.
Uhlelo lokusebenza Ibuye ibe nesixhumi esibonakalayo sokuhlela uhlelo lwe-HTTP, ama-webhook, i-Space Client software kit, izinkambu zenkambiso nokuzenzekelayo. Maduze izonikela ngezicelo ezizimele nezizimakethe, kanye nezinye izici ezibheke emphakathini.
"AmaJetBrains aqale njengenkampani yonjiniyela, kepha manje u-40% weqembu lethu udlala indima eyahlukene kwezobuciko: abasiki bengqephu, abakhangisi, ababhali bamakhophi nabanye," kusho isikhulu seJetBrains uMaxim Shafirov. "Senze iSpace ukuze siqhubeke nokusebenza ngokubambisana njengeqembu futhi sikholwa wukuthi nezinye izinkampani zizohlomula."
Okwezici ezigqama kusuka ku-Space, singathola okulandelayo:
I-HTTP API: ama-webhook nama-SDK amaklayenti wokuhlanganiswa namathuluzi angaphandle.
PNgokwezifiso nezimo futhi ezishintshayo: kumkhiqizo onenkambu yangokwezifiso nokugeleza kokusebenza kweKotlin ukuhambisana nezinhlaka nezinqubo ezithile zenhlangano.
Ama-bots asebenzayo nemiyalo: Izicelo zingabhalisa ama-bots azosebenza njengabalingani engxoxweni futhi angaxhumana nawo. Enye indlela yokuxhumana nezinhlelo zokusebenza imiyalo.
Isikhala njengeseva yokugunyazwa: I-OAuth2, inqubo ejwayelekile yokugunyazwa komkhakha, isetshenziselwa ukunikeza ukufinyelela kwe-Space kuzinhlelo zokusebenza zangaphandle, ukuhlanganiswa nezinsizakalo.
I-SDK Client Yesikhala: I-Space Client SDK esemthethweni yeKotlin ne .NET inikezwa ukunika amandla ukuhlanganiswa okuqinile ne-Space ezingeni lekhodi yomthombo.
Izicelo: Indlela eyinhloko yokwandisa i-Space. Thuthukisa izinhlelo zokusebenza ezisebenza ngamamojula e-Space ahlukile futhi zenze izenzo ezihlukile.
Isikhala siqala ngesigaba samahhala sezinkampani ukuzama isoftware nezinketho zokubhaliselwe eziqala ku- $ 8 ngomsebenzisi ngamunye osebenzayo ngenyanga ngokusebenzisana kweqembu elibanzi. Ipulatifomu iyatholakala efwini futhi izophinde ibe nohlobo lwendawo kungekudala.
Ekugcineni, uma unentshisekelo yokwazi kabanzi ngakho, ungakwazi hlola isixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukuhlela » IJetBrains yethula i-Space, ipulatifomu yokubambisana yabathuthukisi nabadizayinisi
Inhlangano yeLibra ishintsha igama layo bese iba yiDiem Association